कूटनीतिका मियो- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ७, २०७४ डा. जयराज आचार्य
यदुनाथ खनाललाई थाहा थियो— अमेरिकाले नचाहेमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा केही पनि हुँदैन । सुरक्षा परिषद्मा पाँच स्थायी सदस्यमध्ये चार एकातिर (अमेरिकी पक्षमा) हुन सक्थे । त्यस कारण यस विषयमा खनालले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत क्यारोल सी. लेसलाई बोलाएर कुरा गरे । लेसले कूटनीतिक शैलीमा खनालको प्रशंसा गरिन्, तर यस्ता विषयमा कसैको व्यक्तिगत क्षमताभन्दा पनि देशको अवस्था, सम्बन्ध र हैसियतले काम गर्ने कुरा गरिन् । खनालले कुरो बुझिहाले । त्यो प्रस्तावको चर्चा बाहिर ल्याएनन् । निक्सनले आफ्नो स्वागत–भाषणमा ‘तपाईंजस्तो ख्यातिप्राप्त र उच्च सम्मानप्राप्त व्यक्ति’ भन्नुको कारण थियो— अमेरिकीहरूले रूसी प्रस्तावका बारेमा थाहा
पाएका थिए ।
प्रकाशित : आश्विन ७, २०७४ ११:०५